Zidane oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Osasuna & magacyada xiddigo badan oo liiskan ka maqan – Gool FM
(Madrid) 25 Sebt 2019. Tababare kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane wuxuu daaha ka rogay liiska 19 ciyaartooy ee kaga qeyb galaya kulanka horyaalka La Liga ay caawa ku soo dhaweyn doonaan naadiga Osasuna garoonka Santiago Bernabeu.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caawa soo dhoweynaysa naadiga Osasuna kulan ka tirsan horyaalka La liga iyadoo macallin Zidane iyo wiilashiisu ay maanka ku hayaan inay caawa hoggaanka La Liga la wareegi karaan.
Waxaa liiskan uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane siyaabo kala duwan kaga maqan magacyada dhowr ciyaartooy, iyadoo kuwa dhaawacyada ku maqan ay ka mid yihiin sida Marcelo, Isco, Modric, Ferland Mendy iyo Asensio, sidoo kale waxaa siyaabo farsamo dhanka mcalinka ku maqan, xiddigaha Ibrahim Diaz iyo Mariano Díaz.
Sidoo kale Zinedine Zidane ayaa doorbiday inuusan liiskan ugu yeerin xiddiga reer Weles ee Gareth Bale, si uu nasiino u siiyo, madaama uu si joogta ah u soo ciyaaray labadii kulan ee ugu dambeysay ay kula ciyaareen kooxaha Paris Saint-Germain iyo Sevilla, tartamada horyaalka La Liga iyo Champions League.
Haddaba liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Osasuna oo dhameystiran ayaa ah sidan: